Mahajanga fialan-tsasatra: sarotiny amin’ny fahadiovan’ny Bord ny Lehiben’ny faritra | Région Boeny
Manoloana ny fihavian’ireo vahiny sy mpiala-sasatra marobe eto Mahajanga dia nanao fanambarana ny amin’ny fandaminana ara-pifamoivoizana anatiny sy ny fahadiovan’ny tanàna ny Lehiben’ny faritra Boeny Atoa Saïd Ahamad Jaffar ny Alakamisy 10 aogositra 2017 teny amin’ny Bloc Administratif Ampisikina, Mahajanga.
Nisy ny fivoriana mialoha niarahan’ny Prefektioran’i Mahajanga, ny Faritra Boeny, ny Kaomina ambonivohitr’i Mahajanga, ny Sampan’asa misahana ny fitaterana an-tanety na ATT Boeny (Agence des transports terrestres), ny polisy monisipaly ary ny polisim-pirenena nandinihana indrindra ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina amin’izany fandaminana ny tanàna izany.
Toy izao ny fehin-kevitra nivoitra tamin’izany, izay nanaovan’i Lehiben’ny Faritra Boeny fanambarana.
Maro dia maro ireo fiara mivezivezy eny amin’ny Bord amin’izao fotoam-pilantsasatra izao, ka miteraka fitohanana lavareny amin’ny fifamoivoizana eny an-toerana. Ankoatra izay dia misy amin’izy ireny no matory eny amin’ny Bord ka eny amin’ny manodidina eny ihany izy ireo no mivalan-drano sy manao maloto fa tsy mamonjy ireo “bain-douches sy wc public” efa natokana ho amin’izany. Vokany, mamofona maloto ny Bord.
Efa nisy nefa ny lalàna navoakan’ny Kaomina mandrara ny fivezivezen’ireo fiara milanja mihoatra ny 3t 500 ny eny amin’io faritra io. Teo ihany koa ny naoty navoakan’ny Prefektiora manamafy izany. Ary notsindrian’Atoa Lehiben’ny faritra fa tsy azo atao intsony, manomboka izao ny mitondra ireo fiara vaventy eny amin’ny Bord, izany hoe avy eo amin’ny Jardin Damour hatreny amin’ny tranoben’ny ENEM.
Miantso ireo rehetra voakasik’ireo fepetra ireo araka izany ny Lehiben’ny faritra Boeny mba hanaja ny lamina eto an-tanànan’i Mahajanga. Manentana ireo mpitondra vahiny ihany koa izy fa efa misy ny toerana natokan’ny Kaomina hametrahana ireny fiara vaventy ireny.
Hisy ny fanaraha-maso hifarimbonan’ny polisy monisipaly sy ny polisim-pirenena, ary haverin’izy ireo avy hatrany ireo fiara vaventy minia mandeha eny amin’ireo toerana voafaritra ireo. Hampitomboina araka izany ireo takelaby famantarana manoro ny mpamily ireo làlana tsy azony aleha.
Mikasika ny “bain-douches sy wc public” hoy ny Lehiben’ny faritra dia tsapa fa tsy maharaka amin’izao vanimpotonanan’ny fialantsasatra izao izy ireo satria telo monja no isany eny amin’ny Bord. Vahaolana vonjy maika narosony dia ny fandrindrana azy ireo hisokatra 24/24 ora.
Ankoatra izay dia miantso manokana ireo mpamily mpitatitra vahiny ny tenany, mba haka aina 24ora mialoha raha azo atao mialohan’ny hitondra fiara, hitodi-doha amin’izay toerana niaingàna, hisorohana ny lozam-pifamovoizana, fa tsy dia handany ny alina eny amin’ny Bord nefa mbola hamily fiara vao mangiran-dratsy ny maraina.
Ary manentana ny rehetra, na vahiny na tompon-tany, na mpivarotra na mpitsangatsangana, mba samy hitandro ny fahadiovan’ny Bord. Toerana fitsangatsanganana sy fifohana rivo-dranomasina madio eny hoy izy fa tsy toerana fanaovana maloto sy fanariana fako sanatria, ka tokony ho sarotiny ny rehetra amin’io fananana iombonan’ny Malagasy io.